Nanao tsia tamin’Andriamanitra aho
"Hitako avokoa ny asan’Andriamanitra, fa tsy takatry ny sain’ny olona ny asa atao atỳ ambanin’ny masoandro ; koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona, tsy ho hitany ; eny, na ny hendry aza no manao hahafantatra izany, dia tsy ho azony fantarina akory. " Mpitoriteny 8:17
Hoy i Jean Rostand ao amin’ny bokiny hoe “Inquiétudes d’un biologiste” (Ahiahin’ny mpandinika ny momba ny aina) : “Arakaraka ny tsy inoana an’Andriamanitra no ahatakarana kokoa hoe nahoana no misy olona hafa mino”. Ary hoy koa izy, ao amin’io boky io ihany, momba ny fananana finoana : “Tsy mitsahatra aho manontany tena isanandro… Nanao tsia tamin’Andriamanitra aho, ary somary nitratrevatreva nanambara ny zavatra heveriko ho marina, kanefa miverina hatrany ilay fanontaniana. Hoy aho anakampo : Ahoana àry izany? Momba ny kisendrasendra, ohatra, dia naverimberiko tamin’ny tenako ny hoe: tsy ny kisendrasendra velively no afaka hanambatambatra singa. Fa inona?... Raha ny fahaizana ny momba ny aina no ampiharina, na ny voninkazo fotsiny aza dia toa sarotra hazavaina hoe avy amin’ny kisendrasendra. Misy zavatra tsy ampy… fanontaniana maro no mifanesy, ary ireo ihany fa tsy miova. Avadibadiko ireo… Mibahana ao an-tsaiko, aleo tsorina, tena mibahana ao an-tsaiko, raha tsy Andriamanitra, dia farafahakeliny ny tsy fisiany.”
Deraina ny fahitsian’ity manam-pahaizana ity, kanefa mampalahelo ny fandavany tsy hampiditra an’Andriamanitra ao anatin’ny fiheviny. Miezaka izy hanazava samirery ny zava-miafina lehibe momba ny aina, ezaka tsy misy vokany. Mihitsoka eo amin’ny fanontaniana tsy mamela azy hanana fiadanam-po izy. Kanefa, na ho nanaiky aza izy fa Andriamanitra nampisy ny zavatra rehetra, namorona azy avy amin’ny tsy nisy, dia mbola tsy ho fantany ihany Ilay Andriamanitra Mpamonjy. Ary ny asa namonjen’Andriamanitra ny voariny tsirairay dia tsy takatry ny saina, tahaka ny asam-pahariana ihany : Andriamanitra dia mamonjy olona mahantra ara-toe-panahy tahaka antsika, tamin’ny nanekeny hanome ny Zanany. Inona no zava-dehibe kokoa noho izany?